Cup nke chocolate, ude na ahuekere | Bezzia
Iko chọkọleti, ude na ahụekere
Maria onyekwere | 08/06/2021 10:00 | Postres
Ọ bụrụ na m gwara gị na ị nwere ike ịme ihe eji megharịa ọnụ a na 10 nkeji, ị ga-ekwere ya? Iko chocolate, ude na ahuekere bu a akwa ozo mgbe anyi nwere ndi obia n’ulo. Anyị nwere ike ịhapụ isi ihe chọkọletị emere ma gbakwunye tupu ị na-eje ozi ndị ọzọ.
Ego ole ka ọ ga-efu gị iji kwadebe iko ndị a? Ihe dị ka nkeji 10. Mgbe ahụ, ị ​​ga-ahapụrịrị ha ka ha dị jụụ na ime ụlọ ma ọ bụ debe ha na ngwa nju oyi ma ọ bụrụ na ị gaghị eri ha n'otu ụbọchị ahụ. Akpụkpọ anụ chocolate Ọ dị ezigbo nro ma nwee ike iji ya naanị ya, mana ude na ahụekere na-atụnye ụtụ n'ime ka eji megharịa ọnụ a karịa.
Ihe na-adọrọ mmasị gbasara ịtinye ahụekere na ihe eji megharịa ọnụ bụ nnu nnu na ndị a na-atụnye ụtụ na dezaati. Na crunchy aka n'ihe banyere a roara n'ọkụ obere ego a na-eji dị ka n'elu. Ma ọ bụrụ na ahụekere abụghị ihe gị, nweere onwe gị ịgbakwunye obere shavings nke chocolate, koko ma ọ bụ cinnamon n'elu ude ahụ.
1 Efrata maka iko 1
Efrata maka iko 1
200 ml nke mmiri ara ehi ma ọ bụ almọnd ọ drinkụ drinkụ
9 g. ọka
1 tablespoon shuga
10 g. koko dị ọcha
Ahụekere a Roara n'ọkụ
Tinye ihe anọ dị na nnukwu efere: almọnd ihe ọ drinkụ drinkụ, ọka ọka, shuga na koko. Mgbe ahụ, gwakọta ya na ụfọdụ akwụkwọ ntuziaka mkpara ruo mgbe agwakọtara ihe niile ahụ.
Were efere ahụ na ngwa ndakwa nri na-ekpo ọkụ maka otu nkeji na ike kachasị. Mgbe ahụ wepu ma kpoo mkpara ndị ahụ tupu etinyeghachi ya na microwave. Tinyegharịa ọrụ ahụ ọtụtụ oge dị mkpa ugbu a site na strok nke 30 sekọnd ruo mgbe ngwakọta ahụ ga-ebuwanye ibu. Na nke m ọ bụ nkeji 4 na mkpokọta.
Ozugbo m thickened wunye ngwakọta n'ime iko ma ka ajụkwa ka okpomọkụ ụlọ.
Mgbe koko mousse dị oyi, jiri ude pịa ole na ole eri nke ahuekere butter, cinnamon na a roara ata.
Kporie iko nke chọkọleti, ude na ahụekere maka eji megharịa ọnụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ntụziaka » Postres » Iko chọkọleti, ude na ahụekere
5 aghụghọ iji bulie nchekwa na obere kichin
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na onye òtù ọlụlụ ahụ gha ụgha